बैंकिङ क्षेत्र सुधारमा गभर्नर डा. नेपालले गरेका प्रयासहरु – Businesssansar
सुष्मा थापा । डा. चिरंजीबि नेपाल गभर्नर बनेसँगै नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निकै परिवर्तनहरु आएका छन् । २०७१ सालमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेका डा। नेपालले पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत नै बैंकिङ क्षेत्रका लागि थुप्रै सकारात्मक नीतिहरु ल्याए । सबै जनतालाई वित्तीय पहुँचमा समेट्ने, बैंकहरुलाई ग्रामिण भेगमा जान प्रेरित गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी बढाएर मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउने, बैंकहरुको चुक्तापुँजी बढाएर बैंकिङ क्षेत्रलाई सबल बनाउने लगायत थुप्रै सकारात्मक पहलहरु डा। नेपालको पालामा भएका छन् । यस पटक गभर्नर डा. नेपालको चौथो मौद्रिक नीति आउँदैछ । अबको मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ व्याजदर, तरलता व्यवस्थापन लगायत डिजिटल समग्रमा, गभर्नर। डा. चिरंजीबि नेपालले बैंकिङ क्षेत्रको विकासका लागि चालेका महत्वपूर्ण कदमहरु यहाँ उल्लेख गरिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७२।७३को मौदिंक नीतिमार्फत गभर्नर डा। नेपालले बैंकहरुको चुक्तापुँजी बढाउने नीति ल्याएका थिए । उक्त मौद्रिक नीतिमार्फत उनले बैंकहरुलाई ०७४ असार मसान्तसम्ममा चुक्तापुँजी चार गुणा बढाउन निर्देशन दिएका थिए । पुँजीवृद्धिका लागि उनले मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गरेका थिए । सुरुमा त, राष्ट्र बैंकको यो नीतिको चौतर्फी विरोध भयो । तर, राष्ट्र बैंक टसको मस नभएपछि बाध्य भएर बैंकहरु पुँजी बढाउनतर्फ लागे । अन्ततः अधिकांश बैंकहरुले आठ अर्ब चुक्तापुँजी पुर्याइसकेका छन् भने केही पुर्याउने क्रममा छन् । यो क्रममा मर्जर र एक्विजिसनका कारण बैंकहरुको संख्या घटेको छ । यद्यपि, बैंकहरुको शाखा सञ्जाल अझ बढेको छ भने समग्र बैंकिङ क्षेत्र थप सबल भएको छ ।
गभर्नर डा। नेपालले उनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको बैंकिङ लगानीलाई निरुत्साहित पार्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति ल्याए । सुरुमा २० प्रतिशत लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भनिएकोमा पछि २५ प्रतिशत पुर्याइयो । जसमध्ये, कृषि र उर्जा क्षेत्रमा मात्रै १५ प्रतिशत लगानी गरेको हुनुपर्छ । यो नीतिमार्फत नाफा कमाउने मात्रै उद्देश्य बोकेर घर, गाडी जस्ता अनुपादक क्षेत्रमा लगानी खन्याइरहेका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुर्याउन बाध्य पार्यो । यो नीतिले रोजगारीको खोजीमा विदेशीने कयौँ युवालाई स्वदेशमा नै स्वरोजगार बन्न समेत प्रेरित गर्यो । यही नीतिका कारण पछिल्लो समयमा बैंकबाट कर्जा लिएर तरकारी खेती, पशुपालन लगायतका उद्यममा लाग्ने वातावरण सृजना भएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनकै लागि राष्ट्र बैंकले घरजग्गा तथा गाडी कर्जामा कडाइ गर्दै आएको छ ।
धनी वर्गलाई मात्र लक्षित गरेर घर, जग्गा, गाडी जस्ता कुराहरुमा बैंकहरुले लगानी गर्न थालेपछि विपन्न वर्गहरुले बैंकबाट कुनै सहयोग पाउन सकेका थिएनन् । यसले गर्दा, गरीबहरु कहिल्यै माथि उठ्न सकेका थिएनन् । यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा बैंकहरुको लगानीलाई अनिवार्य गरायो । बैंकहरुले २ प्रतिशत लगानी विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्यायो । यो नीतिले पुँजीको अभावमा कुनै व्यवसाय गर्न नसकेर विदेशीने गरेका विपन्न वर्गका युवाहरुलाई पनि उद्यमी बनायो र आर्थिक रुपमा सबल बनायो । सस्तो व्याजदरमा पिछडिएका तथा विपन्न वर्गका जनताहरुले सरल र सस्तो कर्जा पाउन सकून् भन्ने मनसायले राष्ट्र बैंकले यो नीति ल्याएको थियो । आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत भने राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा दुई प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी अनिवार्य नहुने बताएको छ ।
मुलुकका सबै सर्वसाधारणलाई समेट्ने गरी गाउँगाउँसम्म बैंकहरुको उपस्थिती पुर्याउन पनि राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष्भित्रमा सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । सोही अनुसार, बैंकहरुले तयारी पनि थालिसकेका छन् । हालसम्म आफ्नो उपस्थिती नभएका स्थानमा शाखा विस्तार गर्ने मिसनलाई बैंकहरुले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेका छन् । ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये २०७५ बैशाख मसान्तसम्म ५३१ स्थानीय तहहरुमा वाणिज्य बैंकहरुको उपस्थिति पुगेको छ ।
एक अनौपचारिक तथ्यांकका अनुसार नेपालमा ६० प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि वित्तीय पहुँच बाहिर छ । एक त बैंकहरु नै ग्रामिण भेगमा नपुगेका कारण मानिसहरु बैंकमार्फत करोबार गर्दैनन् । अर्को कुरा, मानिसहरुमा बैंकबारे जानकारी नै छैन । बैंक के हो, यसको प्रयोग कसरी गर्ने, बैंकमा पैसा राखेर आफूलाई के फाइदा हुन्छ, बैंकबाट ऋण लिनु र साहुबाट ऋण लिनुमा फरक के छ, लगायत कुराहरुको जानकारी नै नभएका नेपालीहरु ग्रामिण भेगमा मात्र नभएर सहरमा पनि प्रशस्तै छन् । पढेलेखेका भनिएका व्यक्तिहरुमा पनि पैसा कमाउने, बचत गर्ने, लगानी गर्ने जस्ता वित्तीय चेतनाको अभाव छ । त्यसैले, राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रवद्र्धनमा मिडिया इन्टरनेशनलले मुलुकका विभिन्न भेगमा यो कार्यक्रम पुर्याइरहेको छ भने थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि आआफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याइरहेका छन् । वित्तीय साक्षरता अभियानलाई महत्वका साथ अघि बढाएर गभर्नर डा। चिरंजीबि नेपालले थुप्रै नेपालीहरुलाई बैंक मार्फत कारोबार गर्न प्रोत्साहन गरेका छन् ।
यस्ता थुप्रै नीतिहरु डा. चिरंजीबि नेपालले अबलम्बन गरेका छन्, जसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई निकै नै सबल र भरपर्दो बनाएको छ । आगामी दिनमा पनि आवश्यकताअनुसार, यस्ता नीतिहरु ल्याउने कुरामा उनी प्रतिवद्ध छन् । अहिले गभर्नर डा. नेपाल अर्को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छन् ।
Previous Post: ११७९.७१ अंकमा झर्यो सेयर बजार, २० करोडमाथिको कारोबार
Next Post: सामान्य अंकको वृद्धिसँगै नेप्से ११८०.३६ अंकमा